भक्तपुर नपाको निर्णयको अवज्ञा गर्दै गाथामोग पर्व मनाइयो – Indepth.com.np
भक्तपुर नपाको निर्णयको अवज्ञा गर्दै गाथामोग पर्व मनाइयो
डोलेश्वर महादेवको भेटीमा भ्रष्टाचार !
चुँडियो भैरवनाथ मन्दिरको जयपत्र
सुरेशको ‘दोबाटोमा नकुर है’ (गीतसहित)
नर्कट र छ्वालीबाट गथामुग बनाउँदै भक्तपुर नपा ६ चोछेंका स्थानीय । तस्बिरहरु : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाको निर्णयको अवज्ञा गर्दै आइतबार भक्तपुर नगरका टोलटोलमा गाथामोग बनाएर दहन गरिएको छ ।
भक्तपुर नपाको कार्यपालिका बोर्ड बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण हुने भएकाले धेरै मानिस भेला भई सञ्चालन गर्नुपर्ने गाथामोग पर्वमा गाथामोग नबनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार नपाले नगर क्षेत्रमा माइकिङ गरेर गाथामोग पर्व नमनाउन नगरवासीलाई आह्वान गरेको थियो ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यममा सूचना दिएर यस वर्ष गाथामोग पर्व नमनाउन नपाले आह्वान गरेको थियो ।
भक्तपुर नपाले गाईजात्रामा घिन्ताङघिसीसँगै अन्य परम्परागत नाचसमेत निकाल्न नदिने निर्णय गरेको थियो ।
नपाको उक्त निर्णयको विरोधस्वरुप आइतबार भक्तपुर नगर क्षेत्रबाट निस्कने सबैजसो गाथामोग दहन गरिएको छ । तर भक्तपुर नगर क्षेत्रको विशेष आकर्षणको रुपमा रहेको दत्तात्रय मन्दिर परिसरमा दहन गरिने गाथामोग भने बनेन ।
स्थानीयले गाथामोगदेखि महादेवले सिद्धि पाउने भएकाले रोक्ने नपाको निर्णयको खुलेर विरोध गरे । केही टोलमा भक्तपुर नपाले प्रहरी लगाएर गाथामोग बनाउन रोक्न खोजेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित भएका थिए । उनीहरुले परम्परा र संस्कृति रोक्नु आत्मघाती हुने भन्दै कुनै हालतमा गाथामोग बनाउन नरोक्ने भनेपछि प्रहरी फर्केका थिए ।
स्थानीयले नपाकै आग्रहमा बिस्का जात्रा र देवालीसमेत रोकेको तर अहिले आएर गाथामोग पर्व पनि रोक्न भनेपछि स्वीकार्य नभएको बताए ।
‘गाथामोगमा महादेवले् सिद्धि पाउँछन् । यसैबेलादेखि नेवारहरुको सबै जात्रापर्व सुरु हुन्छ’, एक स्थानीयले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण पर्व पनि रोक्ने हो ? सबै जात्रापर्व रोक्ने भए धर्म नाश भइहाल्छ नि !’
कुन लिंगको हुन्छ गाथामोग ?
पुलिंगी गाथामोग ।
स्त्रीलिंगी गाथामोग ।
प्रत्येक वर्षझैं यस वर्षको साउन कृष्ण चतुर्दशीका दिन काठमाडौं उपत्यकासँगै देशभरका नेवार वस्तीका चौबाटो, तीनदोबाटो तथा दोबाटोमा गाथामोग (घण्टाकर्ण) जलाइएको छ ।
यसरी जलाइने गाथामोगको लिंग कुन होला ? सबैको उत्तर पुलिंग भन्ने आउनसक्छ । तर भक्तपुरमा मनाइने गाथामोग पुलिंगीमात्रै हुँदैनन्, स्त्रीलिंगी गाथामोग पनि नगर तथा गाउँका टोल टोलमा जलाइँदै आएको छ । पहिले धेरै स्थानबाट निकालिने पुलिंगी र स्त्रीलिंगी गाथामोग अहिले भने एकाध ठाउँमा मात्रै अस्तित्वमा बाँकी छ ।
जसमध्ये भक्तपुर नपा २ व्यासीमा भने अहिलेसम्म पुलिंगी र स्त्रीलिंगी दुइटै गाथामोगलाई सँगै लगरे जलाइँदै आएको छ । आइतबार पनि स्थानीय वासिन्दाले पुलिंगी र स्त्रीलिंगी गाथामोग बनाएर स्थानीय भक्तपुर नपा १ हाकुफल्चास्थित तीन दोबाटोमा दहन गरेका छन् ।
अरु ठाउँमा जोडी गाथामोग बनाइए पनि पुलिंगीमात्रै बनाएर दहन गरिएको छ ।
‘पहिले भक्तपुरका धेरै ठाउँमा पुलिंगी र स्त्रीलिंगी गाथामोग सँगसँगै बनाएर दोबाटो, चौबाटोमा दहन गरिन्थ्यो’, संस्कृतिविद् ओमप्रसाद धौभडेलले भने, ‘तर अहिले भक्तपुर नपा २ व्यासीमा मात्रै यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।’
जोडी गाथामोगमध्ये पुलिंगी र स्त्रीलिंगी स्पष्ट छुटिन्छ । पुलिंगी गाथामोगको अनुहारमा जुँगा बनाइएको छ । त्यस्तै पुरुष जनेन्द्रीयको रुपमा लट्ठीमा बाँटिएको पराल बेरिएकोसँगै दुइटा भोगटे झुन्ड्याएका छन् ।
स्त्रीलिंगी गाथामोगको अनुहारमा भने गाजल लगाइदिएको छ । त्यस्तै पराल बेरेर स्त्री जनेन्द्रीय बनाएर झुण्ड्याइदिएको छ ।
पुलिंगी र स्त्रीलिंगी गाथामोग दहन गर्नुअघि तिनीहरुलाई समागम गराइन्छ । त्यस्तै एकजोडी गाथामोगलाई सेलाउन लाँदा अनेकौं अश्लील गालीगलौजसमेत गरिएको छ । मानिसलाई यौनलाई भुलेर अब धर्मकर्म तथा विकास निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन यस्तो अश्लील गाली गर्ने प्रचलन चलेको धौभडेल बताउँछन् ।
‘सर्वसाधारणलाई यौनप्रति घृणा जगाउन गाथामोग सेलाउन लाने क्रममा मुखमा आएजति अश्लील गाली गर्ने प्रचलन छ’, उनले थपे, ‘होलीपछि गाथामोग पर्वमा अश्लील गाली गरिन्छ ।’
उनका अनुसार गाथामोग सुरु भई नाग पञ्चमीपछि काठमाडौं उपत्यकामा चिसो सुरु हुने भएकाले प्रेम, यौन क्रीडा, समागमलाई भुलेर धर्मकर्मतिर लाग्ने तथा विकास निर्माणतिर लाग्नुपर्ने सन्देश एवं प्रतीकस्वरुप गाथामोगको जोडीलाई समागमकै स्थितिमा दहन गरिन्छ ।
Related Topics:COVID 19FeaturedGathamogaGhantakarnaTOURISM